iBus chishandiso chisiri chepamutemo chekudzorera Apple Watch [vhidhiyo] | Ndinobva mac
iBus chishandiso chisiri chepamutemo chekudzorera Apple Watch [vhidhiyo]
Kubva kuvhurwa kwayo, vashandisi vazhinji vanga vachida kuona apo Apple yatanga tambo iyo ingatibvumidze kubatanidza yedu Apple Tarisa kuMac uye nekudaro tikwanise kuidzosera kana paine matambudziko ekushanda ne beta kana kungoteedzera nziyo zvakananga pasina kuenda kuburikidza neinofara Wi-Fi kana yeBluetooth yekubatanidza iyo iri yakanyanyisa kunonoka. Apple parizvino mhinduro chete yainopa kumusimudziri (Apple Watch betas hazviwanikwe muchirongwa cheveruzhinji beta) kuitira kana uine matambudziko ne beta iri enda kuApple Chitoro kwaunogona kudzoreredza mudziyo. Asi izvo zvinoita sekunge zvapera.
iBus chishandiso chinotibvumidza isu kubatanidza yedu Apple Watch, zvisinei nemhando yayo, kune iTunes. MFC, musiki wayo, anodaro ndicho chokutanga chiripo pamusika uye ane mashandiro anotiratidza muvhidhiyo iri pamusoro, kwayinotiratidza kuti mushure mekusanganisa iyo Apple Watch kune chishandiso tinogona kuidzorera pasina matambudziko. Nhanho yekutanga yekugona kudzoreredza chishandiso ndechekuiisa muDFU modhi, maitiro akafanana chaizvo neatinoita isu kuisa yedu iPhone, iPad kana iPod touch mune ino modhi.
Isa iyo Apple Watch muDFU modhi
Kune izvi isu tinofanirwa kutsikirira uye Dhinda uye ubatisise korona yedhijitari uye bhatani rerutivi kwemasekondi gumi. Mushure memasekondi gumi isu tinofanirwa kusunungura bhatani repadivi asi ramba takabata bata bhatani. Kana apuro raonekwa paApple Watch, tinofanirwa kubatanidza tambo yeBus kuApple Watch, toibatanidza netambo yemheni uye tibatanidze neMac yedu. yewatchOS yatinoda kuisa, vhezheni yatinofanirwa kunge takambotora pasi.
iBus inotengeswa pamadhora zana yemhando yekutanga uye neApple Watch Series 1. Ipo tambo yeBus yeApple Watch Series 2 iri pamutengo pamadhora zana nemakumi masere. Tinogona kuwana tambo mbiri dzakananga pane webhusaiti yeMFC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » iBus chishandiso chisiri chepamutemo chekudzorera Apple Watch [vhidhiyo]
Uye kana iwe uine apuro wachi demo vhezheni kana neicloud, inodzoserwa uye inodzoreredzwa isina maakaundi uye sefekitori?
Microsoft ichaita zviuru zvemabasa pasi rose neChishanu
A MacBook Pro Retina 13 "kubva muna2015 kwe1199 euros